Ikhaya Lomndeni LakwaHoras eLake Toba, eSamosir - I-Airbnb
Ikhaya Lomndeni LakwaHoras eLake Toba, eSamosir
Tuk Tuk, Samosir, North Sumatra, North Sumatra, i-Indonesia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Hotmian
Ikhaya Lomndeni liyindawo egcwele futhi enamasitezi amabili e-Batak villa eSouth Bay of Lake Toba eTuk Tuk, eSamosir, enezithelo eziphilayo nengadi yemifino, ingadi yama-orchid, onogwaja, ulwandle oluncane lwesihlabathi, i-kayaking yamahhala, ukudoba, ukuhamba ngesikebhe, i-WIFI. .
Sihlinzeka ngekhaya elihlonyiswe ngokugcwele ngqo eLake Toba eliqondise ikakhulukazi iqembu labangane noma imindeni enezingane. Ikhaya liza nengadi yemifino ephilayo kanye neqoqo elibanzi le-orchid, i-cacti ne-succulent, ichibi lezinhlanzi kanye nethala elizimele ngqo eChibini. Imisebenzi yezincane ihlanganisa ukwakha amadikhi kanye nezinqaba zesanti ogwini lwethu oluncane lwesihlabathi, ukuba abangane nezilwane ezifuywayo, kusisiza ukuthi siphakele onogwaja. Ukuqala kusukela eminyakeni engu-6 ukubamba izinhlanzi zosuku echibini lethu lezinhlanzi kuyisipiliyoni esikhulu ikakhulukazi uma kulandelwa ukuthosa nokudla izinhlanzi. Intsha ithanda ukutshuza ebhodini lethu lokuntywila futhi ithathe i-kayak yethu noma isikebhe somndeni siye eLake. Abantu asebekhulile bajabulela nje isimo sezulu, indawo kanye nokuphumula kuhlangene nokubuka ibhayisikobho noma ukufunda incwadi ngezinye izikhathi.
Ikhaya ngokwalo lilala ngokunethezeka abantu abadala abangu-8 + nezingane, kodwa singakwazi ukuhlalisa amaqembu ngokunethezeka kufika izivakashi ezingu-20.
Ikhaya Lomndeni liyisisekelo esihle sokuhlola, i-Tuk Tuk, iSamosir Island kanye neLake Toba.
Indlela engcono kakhulu yokuhlola i-Tuk Tuk ukuhamba nje noma ukuhamba ngebhayisikili. I-Samosir Island iyindawo enkulu futhi ukuyihlola ngendlela engcono kakhulu ukuhamba ngesithuthuthu, imoto noma izithuthi zomphakathi. Ngokusho kwezihambeli zethu izindawo okungafanele ziphuthelwe yi-Tomok, (I-King Sidabutar Tombs), i-Ambarita (Izihlalo Zamatshe), i-Pangururan (i-Hotsprings) kanye noMndeni Wama-Black Gibbons e-Parapat. Sikulungele ukuhlela uhambo olunjalo noma ukukuqondisa ukuthi uye kuphi.
Ukuze uhlole iLake Toba uwedwa, okungcono ukungayi kude kakhulu noma ungase ukuthole kunzima ukubuya, wamukelekile ukusebenzisa i-kayak yethu noma isikebhe somndeni mahhala.
Ngaphandle nje kokuba indawo efanelekile yokuhlola i-Samosir kanye neLake Toba Ikhaya Lomndeni liyindawo ngokwalo ngokwayo ikakhulukazi imindeni enezingane noma amaqembu abangani. Izinto ezenziwa ekhaya nasezindaweni ezizungezile ziphakathi kokunye:
•Ukukha, ukupheka nokudla imifino engadini yethu mahhala
•Ukujabulela inhlobonhlobo yethu yama-orchid, izimbali, i-cacti nama-succulents
Ikakhulukazi izingane ezihlala esitezi esiphezulu edolobheni zingathola okuhlangenwe nakho ezingasoze zakukhohlwa njengokuthi:
•Hhayi nje ukubamba inhlanzi enkulu yangempela ngentonga yokudoba kodwa ngemva kwalokho ukuyidla
•Ukudlala nokuba umngane nezinja zethu
•Ukudlala, ukugona nokuphakela onogwaja bethu
Ngaphambi kokuba izihambeli zethu zize sizobe sikulungele ukusiza nganoma iyiphi indlela futhi siphendule noma yimiphi imibuzo ukuze silisebenzise ngokugcwele Iholide Lazo LaseSumatra / Samosir / Lake Toba. Lokhu kungase kuhlanganise ukuhlela izinto zokuhamba eziphephile nezithembekile kulo lonke elaseNyakatho ye-Sumatra, okuhlanganisa ukuhlinzeka ngohambo olugcwele kanye namashejuli esikhathi angokoqobo ohambo lokubuka indawo nalo olusendleleni lapho uza noma uhamba.
Sizolanda izivakashi e-Parapat futhi siqondise futhi siziphelezele siye esikebheni esilungile nakithi e-Tuk Tuk, Samosir
Ngesikhathi sokuhlala kwesivakashi thina noma abasebenzi bethu sizotholakala kuzivakashi zethu 24/7. Sizobe sikulungele ukuphakamisa imisebenzi, izinkambo kanye nokukhomba izindawo ezingcono kakhulu zokudla nokuzijabulisa.
Ngaphambi kokuba izihambeli zethu zize sizobe sikulungele ukusiza nganoma iyiphi indlela futhi siphendule noma yimiphi imibuzo ukuze silisebenzise ngokugcwele Iholide Lazo LaseSuma…
Hlola ezinye izinketho ezise- Tuk Tuk, Samosir, North Sumatra namaphethelo